Wararkii ugu dambeeyey Ee kacdoonka Shinniile | ogaden24
Wararkii ugu dambeeyey Ee kacdoonka Shinniile
Weli waxaan xal loo helin kacdoonkii gobalka Shinniile ee ay Barbaartu bilaabeen, laguna diidanaa dulmiga uu maamulka Cabdi iley ku hayo.
– Kooxda Jig-jiga oo aad uga khal-khashay kacdoonka Shinniile ka curtay ayaad mooddaa inay durba qaadayaan tallaabooyin dabacsanaan ah laakiin dhagar ah oo la rabo in kacdoonka lagu fur-furo, waxaana kamid ah in Ciidankii liyuuga ee hore loo geeyey gobalka shinniile dib looga soo qaaday iyo in la siidaayey xubno ka tirsan Barbaarta Kacdoonka oo hore loo xidh-xidhay intii uu Kacdoonka shacabku socday, si niyad-waaag been ah loo muujiyo.
-Cabdi iley wuxuu magaalada Diri-dhabe u diray wafti ballaadhan oo isaga matala, oo ay kamid yihiin xubno gobalkaas kasoo jeeda sida C/Xakiim cigaal iyo Xamdigii dhawaanta xilka magac-uyaalka ah loo magacaabay.
-Cabdi iley laftiisu sida warar sugani sheegayaan waxaa u qorshaysan inuu maanta (Aril 25) tago gobalka kadibna uu gurigiisa ugu tago Ugaaska 19-aad ee Beesha soomaaliyeed ee gobalka degta (Ciise), Ugaas Mustafa, wuxuuna rabaa inuu Ugaaska lugaha qabsado kana codsado in kacdoonka la joojiyo.
-Waxyaabaha qorshaysan waxaa kamid ah in ballaan-qaadyo been ah lagu hakiyo kacdoonka shinniile oo odayaasha iyo waxgaradka gobalka loo sheego in xorriyad iyo xuquuqo dheeraad ah lasiindoono oo ay iskood isu maamuli-doonaan oo aan faro-gelin lagu samayn-doonin arrimahooda gudaha laakiin sidaan xogta hoose ku hayno arrintani waa khiyaamadii lagu yaqaannay Cabdi iley. wuxuuna rabaa oo kaliya inuu kacdoonku fashilmo kadibna dhalinyarada kacdoonka dib loo ugaadhsado.
Insha allaah, Warbixinta labaad waxaynu farta ku fiiqi-doonnaa shakhsiyaadka hagar-daamada ku haya, kacdoonka shacabka iyo Barbaarta hormuudka u ah.